ko htike's prosaic collection: နအဖတို့သွားရာလမ်း
Posted by ကိုထိုက် at 17:57
ကောင်းလိုက်တဲ့ စာသားတွေဗျာ.. တကယ့်ကိုရှင်းလင်းစွာ ရေးပြထားတာကို အားကျမိပါတယ်။
ဘုရား တရား သံဃာ ရေးပြီး အဆုံး သတ်တော့ ကြိမ်စာ လိုလို တိုက်ထားတယ် ... တော်တော် တရား ပြည့်ပါပေတယ် ... မောင်မင်းကြီးသားရယ် ...
အများအကျိုးအတွက်လုပ်ခဲ့သောအကုသိုလ်သာဖြစ်သဖြင့်မျောက်ဖြစ်သော်လည်းမျောက်မင်း၊ဒေါင်းမင်း၊ငုံးမင်း ငရံ့မင်းဟသ်ာမင်းစသော မင်းအပေါင်းသာဖြစ်ခဲံ့ပါသည်။မြန်မာပြည်သမိုင်းမှာလည်းသူခိုးကြီးတယောက်ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။သူသည်မတရားကြီးပွားနေသော
သူများဆီကငွေတွေကိုခိုးယူပြီးဆင်းရဲသားအပေါင်းကိုဝေငှပေးခဲ့သည်။ဘယ်သူဆီကခိုးခိုး ခိုးခြင်းသည် အကုသိုလ်ဖြစ်မှန်သူသိခဲ့သော်လည်းအများပြည်သူတွေထမင်းစားရဖို့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအကုသိုလ်
လည်းဘရားကဲ့သို့မင်းအပေါင်းသာဖြစ်ပါပေလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်ကိုသိမ်းအောင်ဆုတောင်းသည်အကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် မှအများအကျီုးကိုရှေးရှုသှောမြင့်မြတ်သောအကုသိုလ်သာဖြစ်ပါသည် ။။ကဲကိုဇွဲရေခများလည်းအများအကျိုးအတွက်ရှေုးရှုပြီးအကုသိုလ်ကိုကျူးလွန်ဝံ့ပါသလား
30 September 2008 at 06:53
30 September 2008 at 07:03
You call that cursing ? That's not cursing. This is cursing :
ကျေးဇူးကြီးလှစွာသော မြတ်စွာဘု၇ားသခင်အား ဦးထိပ်ထားရွေ့ ၊ မဟာပထဝီမြေကြီး ကို သက်သေပြုလျက် ၊
အကျွန်ုပ်သည် ဤမှန်ကန်သော သစွာစကား ကို ဆိုအပ်ပါသည်။
မင်းဆိုးမင်းညစ် နအဖ စစ်အစိုးရသည် ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ကျိုးငှာ ၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သော ပြည်သူများ အပေါ် မတရား လိမ်ညာ လှည့်ဖြားယုံသာမက ယုတ်မာ ညစ်ညမ်း စွာဖြင့် စော်ကား ညှင်းဆဲ သတ်ဖြတ် လျက်ရှိပါသည်။
ဤမှန်ကန်သော သစွာစကားကြောင့် ၊ မင်းဆိုးမင်းညစ် စစ်အစိုးရ နှင့် တကွ ၄င်းတို့၏ အပေါင်းပါ များ၊ မိသားစုဝင် များအားလုံးတို့သည် စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲ ခြင်း ဒုက္ခအဖုံဖုံကို ခံစားပြီးမှသာလျင် သေခြင်းဆိုးဖြင့် သေကြပါစေကုန်သတည်း။
၄င်းတို့သေသော အခါတွင်လည်း အဝီစိငရဲတွင် အထပ်ထပ် အဖန်ဖန် ခံစားကြပါစေကုန် သတည်း။
Mg Myat Thu said...
kha myar yae post nidan mar,
lu phyit lar tar ko yay htar pone ka,
bar loeauasa na khu yaw pyi thama
ya tar tone,
kha myar saraya,
khamyar ka sciencebuddhistism htin pa.